I-Semalt Expert Ichaza indlela i-Web Data Scraping yaziswe ngayo ngeNkundla yoLawulo
Nangona kungabi mthethweni ukurhweba idatha kwiiwebhusayithi ngaphandle kwemvume ecacileyo abanini beewebhusayithi, ijaji isandula ngokuthe ngenye indlela phantsi kweemeko ezithile. I-LabQ zakutshanje zifake isityholo malunga ne-LinkedIn yokuthintela ukuba zikhuphe idatha ukusuka kumaphepha e-LinkedIn.
Kwafika ukutshitshiswa kakubi kubantu abaninzi ukuba i-LinkedIn yaxelelwa ukuba inike ukufikelela kokukhululeka kwamaphepha kwiwebhu. i-hiQ isebenzise i-algorithms yayo yokubona xa umsebenzisi we-LinkedIn efuna umsebenzi ngokusekelwe kutshintsho lomsebenzisi ekwenzeni ipropati yakhe yoluntu.
Iimpawu zokusebenza zihamba kwiedatha ezikhishwe kwiwebhusayithi ye-LinkedIn. Njengoko kulindeleke, i-LinkedIn ayithandanga kwaye iimpawu zokulwa zafakwa kwindawo yokukhusela i-hiQ kwi-extra extraction data. Ngaphandle kwemingcipheko yobuchwepheshe ebekwe kuyo, izikhumbuzo zomthetho eziqinileyo zakhishwa kwakhona.
Isiqalo asizange sikhethe kodwa sithathe umcimbi ngokusemthethweni. I-hiQ kufuneka ifune ukulungiswa komthetho. Le nkampani yayifuna i-LinkedIn yalela ukuba isuse izithintelo zobugcisa. I-hiQ yayifuna kwakhona inkqubo yokukhipha idatha kwi-LinkedIn ngokusemthethweni.
Ngethamsanqa ukuqala, bekufumene oko bekufunayo. Isigwebo sasixhasa i-hiQ. I-LinkedIn yalelwa ukuba isuse onke amanqanaba okukhusela i-hiQ ekukhutsheni kwayo (i-LinkedIn) kumaphepha ewebhu kunye nokunika isandla samahhala njengokuba isenzo sisemthethweni ngokupheleleyo. Ijaji inqamle isigwebo sayo kwizinto ezithi i-hiQ ifuna ukuyifumana yinkcukacha eziye zaboniswa kwimbono yomntu.
Ijaji ayizange ilandele ummangalelwa ukuba asuse yonke indlela yokukhusela eyenziwa ngokumelene ne-hiQ, kodwa wayala ukuba ummangalelwa kufuneka afuneke kwizenzo ezizayo.
Ukukhuthaza idatha evulekileyo yewebhu
Nangona isigwebo sisisigxina sexeshana, kuyashukumisa ukuva ukuba umthetho uxhasa idatha evulekile yewebhu kunye nokufikelela mahala kwiinkcukacha kwi-Intanethi njengoko esi sigwebo siqinisekisa ukuba. Nangona isigqibo sokugqibela siyamkela ummangalelwa, eli qinisekile.
Ijaji ikhuthaze le polisi ngokuvala zonke ii-LinkedIn. Ngoxa i-LinkedIn yazama ukumisa ukuba ummangali wayedlulisa ubumfihlo bakhe, ijaji yayibonisa ukuba ummangalelwa naye uthengisa idatha.
Xa ingxabano yayingenamanzi, ummangalelwa naye wathi isenzo sika-hiQ sasikuphulwa kakubi kweComputer fraud and Abuse Act (CFAA) ngenxa yokuba ukuqaliswa kufinyeleleke kumaseva abo ukuvuna idatha ngokungekho mthethweni. Kwakhona, imbambano yagqitywa. Yayinqatshelwe phantsi kokuba i-hiQ yayihlaba nje umxholo kwinqanaba eluntwini, ngamaphepha angakhuselekanga.
Ijaji ibhala ngelinye icala njengomntu ohamba kwisitye evulekile ngexesha leeyure. Umntu onjalo akakwazi ukutsho ukuba uyaphulaphula. Ngoko, i-hiQ yayingenasiphambeko. Kuyathakazelisa ukuba ijaji yaqhubeka ibonisa ukuba kutheni isigqibo sakhe sinomdla woluntu.
Ngokucacileyo, inkundla yamkele ukuba kunomdla woluntu ukuvumela ukuba idatha ikhutshwe, ikhutshwe kwaye ihlaziywe. Ngoko, kuya kuba ngumgaqo-nkqubo owonakalisayo wokukhuthaza ukufakwa kwemingcipheko yokukhupha ukukhululeka kolwazi.
Oko kufuneka ufunde kwisigqibo
Nangona ungekho izizathu zokukhipha idatha ngqo kwi-LinkedIn, kufuneka ufunde kwisigqibo. Kungcono ukudlala ukhuselekile ngokufunda nokuhlonipha iirobhothi. ifayile ye-txt yazo zonke iiwebhusayithi. Khumbula, isigwebo sisisigxina sexeshana. Ekugqibeleni kuya kuhambelana ne-LinkedIn.
Nangona isigwebo singasichaphazela ngokuthe ngqo, siyavuya kukuba inkundla yombuso iyaxhasa umgaqo-nkqubo wokugcina i-web ivulekele uluntu. Ngoko ke, ulwazi kufuneka lufumaneke kwaye lufikeleleke kulabo abanokuyifumana kunye nokusebenzisa kakuhle.
Iinkcukacha zewebhu zisebenziseka kakhulu kumntu wonke, ingakumbi abahlalutyi beendaba, abaphuhlisi, ooswazi beenkcukacha kunye nabanye abaqeqeshiweyo. Ngaloo ndlela, isigqibo siyi-phuhliso elifanelekileyo Source .